'नाच भालु नाच"गीतको म्युजिक भिडियोमा नाबालक र प्रहरी ड्रेसमा,भिटेन मात्र किन प्रहरीको नजरमा? -
‘नाच भालु नाच”गीतको म्युजिक भिडियोमा नाबालक र प्रहरी ड्रेसमा,भिटेन मात्र किन प्रहरीको नजरमा?
पुष ४ ,काठमान्डौ – पछिल्लो समय नेपाल भारतको सिमा विषयलाई लिएर तयार पारिएको गित’नाच भालु नाच”बोलको गित बजारमा सार्वजनिक भएको छ । गित संगीतको बजार दुनियामा आफनो नाम चर्चा परिचर्चा गरिसकेका गायक संगीतकार मिन प्रकाश ओलीको यो बजारमा सार्वजनिक भएलगतै विवादमा तानिने देखिएको हो । गित संदेश मुलक भएता पनि समाजमा आच आउने खालको म्युजिक भिडियो र दोहोरो अपा,च्या शब्दको प्रयोग भएको छ । “भालु”शब्द हाम्रो समाजको लागि राम्रो शब्द भने हैन ।
‘नाच भालु नाच’शब्द प्रयोग गरिएको गीतको म्युजिक भिडियोमा प्रहरी ड्रेस सहित नाबालक समेत प्रयोग गरिएका छन् । पुलिसका दर्जनी चिन्न सहित म्युजिक भिडियोमा देखिएका छन् । संदेश मुलक गित भएता पनि यो गीतले समाजमा भने एक नकारत्मक छाप छोड्न सक्ने कुरामा दुई मत छैन । म्युजिक भिडियोमा कमेडियन निर आले मगर ,खस भाषाबाट आफुलाई परिचित गराएका कुल बहादुर ओली ,चलचित्रका खलनायक तेजा एयर लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको यो गितमा भालु शब्द प्रयोग भएको छ।
पछिल्लो समय गितमा विभिन्न अपच खाले शब्द प्रयोग भएपछि विवादमा तानिने गरेका छन्। गितमा गोपाल खड्काको निर्देशन मरुभूमि नारायणको छायांकन रहेको छ भने रोशन धितालको सम्पादन रहेको छ। गितलाई रंग दर्पण नेपालले बजार व्यवस्थापन गरेको हो। यो गीतको म्युजिक भिडियो रंगदर्पण नेपालको युटुब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको छ ।
यस्तो छ भिडियो ,
Previous उपमेयरको शौचालय भित्र हात खुट्टा बाँ,धिएर १३ वर्षे बालिका बन्धक,मेयर भन्छिन मलाई फसाईयो
Next ७१० जनामा कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि